WINE 6.13 inoenderera nebasa rekushandurwa kweWinSock PE | Linux Vakapindwa muropa
Ino nguva pave paine kushamisika maererano nezuva rekuuya uku, asi kwete zvakanyanya kana tichifunga kuti ikozvino kune vanhu vanotora zororo. Kunyangwe mazuva mana akapatsanurwa, semavhiki maviri ega ega muchikamu ichi chekuvandudza, uye mushure mekutanga kweiyo v6.12, WineHQ yakaparura masikati ano WAINI 6.13. Iyo itsva Staging vhezheni, kureva kuti, iyo inosanganisira nhau dzichangoburwa uye sarudzo yakanakisa kune avo vanoda kuyedza kuti chirongwa cheWindows chavandudza mashandiro acho muWINE, asi haisi vhezheni yakasimba, saka inogona kusanganisira nyowani tsikidzi.
Semazuva ese, WineHQ yakangosimbisa seinonyanya kukosha nhau shoma, asi inopa runyorwa ruzere rwema tweaks ayo panguva ino anosanganisira 21 akagadziriswa bugs uye 284 shanduko muhuwandu. Pazasi iwe une runyorwa nenhau dzavanofunga dzakakosha; Kuti uone zvese zvavakabatanidza, zvakakodzera kushanyira iyo kusunungura chinyorwa.
Pfungwa dzeWINE 6.13 (Staging)
Iyo chaiyo scroll bar.
Rakawanda basa rekushandurwa kweWinSock PE.
Kugadzirira basa kweiyo GDI syscall interface.
Kumwe kufambira mberi pane IPHLPAPI PE kutendeuka.
Vashandisi vanofarira izvozvi vanogona kuisa WINE 6.13 Staging kubva kune yayo kodhi kodhi, inowanikwa mukati izvi y iyi imwe link, kana kubva pamabhinari anogona kutorwa pasi kubva ku pano. Mune iyi link kubva kwatinga dhawunirodha mabhinari pane zvakare ruzivo rwekuwedzera iyo yepamutemo chirongwa repositi kuti ugamuchire izvi uye nezvimwe zvichavandudzwa munguva yemberi nekukurumidza pavanenge vagadzirira masystem senge Ubuntu / Debian kana Fedora, asi kune mamwe mavhezheni e Android uye macOS. Iyo purojekiti inotibvumidza isu kusarudza bazi pakati peyakagadzikana, kusimudzira kana Dev uye Staging. Kana isu tichida kutora shanduko yazvino shanduko, isu tinofanirwa kusarudza Staging.
Iyo inotevera Stage vhezheni ichave WINE 6.14, uye zvingangoita zvese zvinhu zvichadzokera pane zvakajairwa uye zvinosvika Chishanu chinotevera, Chikunguru 30. Zvinenge zvisingambove nyore kufungidzira kuti ndezvipi zvitsva zvichasanganisira remangwana vhezheni, asi panguva ino isu tinotenda kuti ivo vanosanganisira rurefu runyorwa rwekubata rwavasina kuwedzera mumazororo aya.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Linux software » WINE 6.13 inoenderera mberi nebasa paWinSock PE kutendeuka uye inosvitsa angangoita mazana matatu emakwenzi
Kana iwe uri kushandisa vhezheni isati yasvika 1.36.2 yeBlock Origin iwe unofanirwa kugadzirisa izvozvi